समय यात्रा सम्भव छ
Chandeshwar Das 1 YEAR AGO 1099 views
यसको अर्थ के होला?
समय कल्पना मा व्यापक रूपमा यात्रा यात्रा गर्दछ, तर विचारको लागि केहि सैद्धांतिक आधार छ, हामी सधैं समय मार्फत यात्रा गर्दैछौं, किनकि हामी भूत देखि भविष्यमा जान्छौं। तर समय यात्रा सामान्यतया दर परिवर्तन गर्ने सम्भावनालाई हामीले भविष्यमा यात्रा गर्न सम्भव छ, वा पूर्ण रूपमा यसलाई उल्टाउने ताकि हामीले भूतमा यात्रा गर्यौं। यद्यपि 19औं शताब्दि देखि कल्पनामा एक साधन यन्त्र, समय यात्रा कहिल्यै व्यावहारिक रूपमा प्रदर्शन वा प्रमाणित गरिएको छैन तर अहिले यो सम्भव छ। जब हामी समय यात्रा को बारे मा कुरा गर्छौं, हामी अतीत, वर्तमान र भविष्य को बारे मा कुरा गर्नु पर्छ। तीमध्ये हाम्रो जीवन वर्तमान समयमा छ। यसको मतलब हामी वर्तमान, विगत वा भविष्यमा छैनौं जहाँ हामीले हाम्रो जीवन 1 सेकेन्डमा विस्तार गर्दछौं, यसको मतलब जीवनको 1 सेकेन्ड समयको 1 सेकेन्ड बराबर छ।
यस प्रश्नको जवाफको बारेमा एक पटक सोच्नु होस्:
What will happen if 1 sec of time equals to2sec of life?
जस्तै हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी वर्तमान समयमा बस्छौं, जहाँ:
1 सेकेन्डको समय = 1 सेकेन्डको जीवन
1 घण्टाको समय = 1 घण्टाको जीवन
1 दिनको समय = 1 दिनको जीवन
1 महिनाको समय = 1 महिनाको जीवन
1 वर्ष समय = 1 वर्षको जीवन
यो समयको स्तरले हाम्रो जीवन र समय बराबर छ भनेर देखाउँछ। त्यसैले यो समयले तत्काल समयको बिन्दुलाई जनाउछ। यो मापनमा हामीले केवल तत्काल समयको लागि जीवनको बारे जानकारी छ। हामी भूत वा भविष्य बारे वास्तविक वा सही डेटा प्राप्त गर्न सक्दैनौं। हामी वर्तमान घटनाहरूको बारेमा जानकारी मात्र रेकर्ड गर्न सक्छौं। हामी पनि हाम्रो जीवन र वर्तमान समय मा समानांतर मा यात्रा गर्न पनि भन्न सक्छौं।
अब मुख्य बिन्दुमा आउनुहोस्:
के हुनेछ जब 1 सेकेन्डको समय2सेकेन्डको जीवनसँग बराबर छ भने?
हामी सोच्न सक्छौं "समयको 1 सेकेन्डको जीवनको दोस्रो सेकेन्ड बराबर हुनेछ?"
यो स्केल हेर्नुहोस्
1 सेकेन्डको समय =2सेकेण्डको जीवन
1 घण्टाको समय =2घण्टाको जीवन
1 दिनको समय =2दिनको जीवन
1 महिनाको समय =2महिनाको जीवन
1 वर्षको समय =2वर्षको जीवन
माथिको तहबाट के बुझ्न सकिन्छ? माथिल्लो स्तरले देखाउँछ कि हामी भविष्यमा यात्रा गर्न सक्छौं। हामी 1 सेकेण्डको भित्र2सेकेण्डको हाम्रो जीवनलाई अनुभव गर्न सक्छौं। हामी सबै डेटा / घटनाहरूको जानकारी एकत्रित गर्न सक्दछौं जुन एक दिनको समयमा रहन जीवनको अर्को दिनमा हुनेछ। यदि यो हुनेछ भने हामी हाम्रो भविष्य देख्न सक्छौं। कुनै पनि संदेह छैन यदि हामी भविष्य देख्न सक्दछौं त्यो भविष्यको लागि योजना बनाउन सक्दछ। यो स्तरले भविष्यमा यात्रा गर्ने सम्भावना देखाउँदछ। कसरी सम्भव छ - म "Time Dilation" को अर्को विषयहरूमा चर्चा गर्नेछु।
समय यात्रा साँच्चै एक रहस्य हो, हामी सुन्न मात्र राम्रो छ, तर यसले हामीलाई रिक्त बनाउँछ जब भविष्य वा विगतमा यात्रा गर्न सोच्न सक्छ। वर्तमानमा हामी पनि समय यात्रा गर्छौं तर जीवनको रूपमा यात्रा दर समान छ। त्यो यात्रा दर 1 घण्टा प्रति घण्टा हो। भविष्यमा 1 घण्टा पुग्न हामीले एक घण्टाको समय खर्च गर्नुपर्छ। यदि हामी हाम्रो भविष्यको2घण्टा भविष्यमा पुग्न सक्छौं भने हामी एक घण्टाको समय खर्च गर्न चाहन्छौं जुन यात्रा दर2घण्टा प्रति घण्टा हो। यसको मतलब हामीले थोरै परिवर्तन गर्नै पर्छ
In Special Relativity of Einstein States that the time duration will pass at different rates when comparing object of rest vs motion’s object. Increasing the velocity (Near about velocity of light, C) of object in motion. Then the time for both objects have different, this difference of time is also called Time Dilation.
हामी dilated समयको सूत्र जान्दछौं
T= dilated time
t= usable time
v= velocity of object that is in motion
C= velocity of light
हामी यसलाई व्याख्या गरौं, मान्नुहोस् कि व्यक्ति5दिनको लागि एक मेशिनमा राखिएको छ जसको गति लगभग 2.5 * 10 ^ 8 m/s छ र हामीलाई थाहा छ कि प्रकाशको गति3* 10 ^ 8 m/s हो।
यहाँ व्यक्ति द्वारा प्रयोग गरिएको समय5दिन हो त्यसैले प्रयोगयोग्य समय t =5दिन र मेशिनको वेग जसमा व्यक्ति राखिएको व्यक्ति v = 2.5 * 10 ^ 8 मीटर प्रति सेकेन्ड हो अहिले dilated time निम्न गणना गरिएको छ:
यहाँ हामी देख्न सकिन्छ कि dilated समय T = 9.097दिन हो, यसलाई9दिन मान्नुहोस्। हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं कि व्यक्तिले आफ्नो5दिन मात्र खर्च गर्छ तर मेशिनको वेगको कारणले उनी आफ्नो जीवनको9औं दिनमा पुगिसकेको छ।
यसको अर्थ त्यो भविष्यमा4दिन अगाडी पुग्यो। जहाँ सबै मानिसहरूको लागि केवल5दिन बित्यो, तर मेशिनमा व्यक्तिको लागि9दिन बितिसकेको छ।9दिनसम्म पुग्दा उहाँ भविष्यको सबै डेटा एकत्र गर्न सक्नुहुन्छ। हामी भन्न सक्छौं कि सबै मानिसहरूले5दिनको जीवनको अनुभव गर्दैछ तर मेशिन भित्रको व्यक्ति भविष्यमा4दिन अगाडि पुगिसकेको छ।
अब हामी वातावरण खोज्नु पर्छ जहाँ हामी प्रकाश को वेग को नजिक को गति सृजन गर्नेछौं। यदि हामी त्यस्तो गति सिर्जना गर्न सक्षम छौं भने कुनै पनि समयको यात्रा भविष्यमा नजिक हुन सक्नेछ।
यो प्रकाश को वेग को नजिकैको गति निर्माण गर्न पनि सम्भव छ, र म यो मेरो अर्को लेखमा वर्णन गर्नेछु ।